Ihe ị ga - eme, na ihe ị ga - eme iji zere usoro SEO mkpokọta nyocha kachasị mma?
Ọdịnaya bụ eze. M na-ahụkarị aro dị otú a mgbe ị na-eme nchọgharị na Weebụ. Ọ na-eme ezi uche, ekwesịrị m ikweta. Inwe ọdịnaya dị mma nke nwere mkparịta ụka dị mkpa dị na ya bụ ọkpụkpụ azụ maka ikekwe ọ bụla nkwado nchịkọta saịtị na ndepụta Google nke SERPs (Search Engine Result Pages). Nyere na òkè ọdụm nke ndị ọchụnta ego n'ịntanetị ghọtara isi okwu iji mee ka ibe ha gosipụta n'etiti nsonaazụ ọchụchọ atọ mbụ, ugbu a mkpa dị mkpa nke imejuputa usoro SEO dị mma kachasị mma bụ onye ọ bụla na-emeso ụfọdụ ọrụ azụmahịa na Intanet.
Nchọnchọ Nchọpụta Mmasị na-abịa na mbụ
Ya mere, otu esi emepụta atụmatụ ziri ezi maka SEO nchịkọta njikarịcha isiokwu? Ekwenyere m na ọ dabara na ọ bụ n'echiche nke Search Engine Optimization onwe ya, otú o si arụ ọrụ, ka ọ bụrụ kpọmkwem. Ọ bụ ya mere, tupu ihe ọ bụla ọzọ, anyị ga-aghọta kpọmkwem n 'ụzọ Google si egosipụta nsonaazụ ọchụchọ, karịsịa site n'echiche nke mkpa na ịsọ mpi uru nke okwu ahịrịokwu. Ọfọn, ka anyị gaa!
Chee echiche banyere okwu dị iche iche nke dị iche iche SEO
Nke mbụ, anyị ga-eche ya ihu - ee, Nchọpụta Nyocha Search bụ echiche zuru ezu nke na-ekpuchi ọtụtụ ubi nke ihe omuma nke choro obuna karia oru ndi n'egosi oge. Ma ugbu a, anyị nwere ike izuike, dịka slicing otu ngalaba iji mee ka SEO dịka atụmatụ nyocha kachasị mma bụ ọrụ dị mfe. Ma mụ onwe m, m na-atụ aro ka ị banye n'ime isiokwu nke isiokwu ndị ahụ na-arụ ọrụ na nkwanye obi ike. Ekwuru m na ị ga - agbalịrị ime ya n'onwe gị, n'enweghị enyemaka ọkachamara ọ bụla. Ị nwere ike ijikwa ya. Na-eburu n'uche na SEO isiokwu njikarịcha adịghị mfe ma ọlị. N'ezie, ka anyị ghara ịṅa ntị na ndị ahụ ga-abụ "ndị nkwụsị" na-etinye na Ịntanetị na-anwa ime ka onye ọ bụla nwere ike ịchọta. Na-eleghara okwu ọ bụla dara ụda anya na-etu ọnụ na usoro ndị ha mere n'oge na-adịbeghị anya, dịka ọmụmaatụ, na ọkwa dị mkpirikpi nke nchịkọta algorithm kachasị ọhụrụ nke Google.
Ma ọ dịghị mkpa ka anyị debe ihe ọ bụla na egwu ahụ, ọ dịkarịa ala mgbe anyị lekwasịrị anya n'ọhịa nke SEO mkpokọta njikarịcha. N'eziokwu, anyị nwere ike ịnweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe a, nanị ihe dị iche iche na-eme. Ana m ekwukwa nke ahụ n'ezie, dịka ọ bụ ihe dị mma nke gosipụtara na nke kachasị nke ndị nwe ụlọ ọrụ ọhụrụ na novice webmasters - ihe niile ha chọrọ bụ nkwụsi ike siri ike ịgbaso ihe ndị dị mkpa. Ya mere, ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị na-asọmpi, ma enwere oge zuru oke - ị nwere ike ime nke ọma. Echere m ebe a ị ga-enwe ike ime SEO nke kachasị mma nke isiokwu, naanị na-eduzi ụkpụrụ ya. Ya mere, ugbu a, anyị na-aga ịtọgbọ ala maka omume mbụ anyị. Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị nwee ike ịme ihe na-esonụ:
Chee echiche nke ndị ahịa gị na ezi ebumnuche ha.Gbalịa ịghọta ihe ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị nọ n'ime ụlọ ahịa gị nwere ike ịchọta;
Wepụta usoro nyocha nke zuru oke nke isiokwu dị mma na keyphrases kachasị ka ndị ezigbo ọrụ na-ejuputa ajụjụ gbara ajụjụ.Meezie ndepụta ọzọ nke ndị na-ede aha na ide ederede ma ọ bụ echiche ọ bụla na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ. Ozugbo e mechara ya, were ndepụta abụọ maka nyocha;
N'ụzọ dị otú a, ị ga-ahụ ihe ọ bụla na-adịghị mma, n'ihi ya ị nweta ndepụta ikpeazụ nke isiokwu ndị dị na ya n'ụzọ dị oké ọnụ ahịa karịa mgbe niile. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-enwerịrị ọnụọgụ abụọ maka okwu ọbụla na-arịọ ya na Google iji jide n'aka na okwu ọchụchọ ọ bụla nwere egwuregwu zuru okè;
Na - esote, ị kwesịrị ịnye ihe mgbaàmà ziri ezi na engines ọchụchọ, dị ka ịsị "nabatara" na bots ha na-agba agba;
N'ikpeazụ, anyị kwesịrị inyere Google aka ịchọta njikọ kwesịrị ekwesị n'etiti ibe weebụ yana isiokwu dị mkpa gị.
Nwee okpukpu atọ na isiokwu ọ bụla na nhazi ikpeazụ gị
Ozugbo anyị mepụtara nke a, -n'ụzọ ọdịda maka SEO usoro nyocha njirimara iji malite, anyị ga-emesị laghachi azụ na isi okwu gị. Enwetala oge gị na mgbalị gị na ịlele ndepụta nke isiokwu gị ọzọ. Nchịkọta weebụ gị chọrọ naanị isiokwu kachasị mkpa, ma ọ bụghị ọdịnaya ndị na-asọmpi ka ị nwee ezigbo ihe ịga nke ọma. Ma, buru n'uche na mgbe ị malitere iwetara SEO gị nchịkọta njirimara n'ime arụmọrụ, ọ gaghị enwe ike ịlaghachi ma mee mgbanwe maka ọtụtụ keyphrases, ọ bụghị iji kwuo na ndepụta niile agaghị eme ka ị nwee uche.
Ị ka na-ejide n'aka na ị na-ahọrọ Keywords kwesịrị ekwesị iji rụọ ọrụ nke ọma n'ime atụmatụ SEO nke kachasị mma? Ọ bụrụ na ị na-eche ihe isi ike ọ bụla na isiokwu ntinye nhọrọ, ana m atụ aro ka iji ndepụta nlezianya ndị dị na mbụ (Mee) na ụfọdụ ịdọ aka ná ntị (DON'ts):
Ndepụta nke Do na DONtts
Mee Research maka Keywords
Dị ka ama kwuru, na-eme a kwesịrị ekwesị isiokwu nnyocha na-ewepụta dum SEO isiokwu njikarịcha atụmatụ na nri akara. Ma ọzọ - mmejọ ma ọ bụ nhiehie adịghị anabata ya ebe a, n'ihi na ha nwere ike igbochi gị ịme ihe ọ bụla n'ụzọ dị n'etiti gị iche ahịa niche na aha aha azụmahịa gị. Ọ bụrụ na ị na-ala azụ ebe ị ga-amalite ime nnyocha nyocha, ị nwere ike ịhụ na ọ na-enye aka ide ndepụta nke isiokwu ndị metụtara ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ma ọ bụ na ị nwere ike iji ya mee ihe na ibe gị (blog)
Na-atụle Ngwá Ọrụ ahụ
M pụtara ebe a ị na-enwere onwe gị mgbe ọ bụla ị ga-eji ụfọdụ ezigbo ọkachamara, di na nwunye nke ndi iro gi kachasi elu na ileta ibe ha iji nweta ezi uche n'ime ihe ndi ha nwere, na okwu ndi ozo na-aputa ihe kariri. N'ụzọ dị otú a, ị rịọ otu isiokwu na Google ga-enye gị foto zuru oke nke mkpa (àgwà nke isiokwu) n'otu oge ahụ, na-atụ egwu ya (asọmpi). Cheta, ihe kachasị mkpa ma ọ bụghị nke a na-ejikarị okwu eme ihe bụ n'ezie ihe kachasị ike.
Ejila Keywords Generic Keywords
Zere ịbụ ndị na-etinye aka na asọmpi elu na-ebuli elu maka ihe ọ bụla na-emekarị. Ọ ga-akara gị mma iji mkpụrụokwu nkebi okwu, dịka naanị otu okwu ọ dịtụghị mkpa ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-enwe obi nkoropụ, ị nwere ike ile ụfọdụ okwu ọchụchọ ndị dị na Google. Ntughari ala ihu akwukwo mbu ma gbakwunye na ikwu okwu dika agwakota gi na ihe ederede gi gabu ihe nghota zuru oke ebe a.
Echegharala uru ndị dị na mpaghara
echefukwala ikpuchi ndị ọzọ na-ege gị ntị. Mee ebe azụmahịa gị nke Google maara nke ọma, dịka tinye akụkụ nke ọnọdụ gị (e. g. , obodo, obodo, ma ọ bụ mpaghara) na nhọrọ kachasị mma ị chọrọ. N'ịgwa ọbụna ndị ahịa ahịa karịa ndị ọzọ, azụmahịa gị ga-erite uru site na njirimara SEO kpọmkwem na mpaghara. Echefukwala iwepụta oge maka nchịkọta mpaghara gị ma na Google, na n'ebe ọ bụla ọzọ ịnweta ọkwa dị elu na SERPs ka ịmalite na-achịkwa niche ahịa mpaghara gị ozugbo na maka ihe niile Source .